कुन दल अगाडि ? काँग्रेस अग्रस्थानमा, एमाले दोस्रो – TibraKhabar (तीव्रखबर डटकम) छिटो खबरको एउटै विकल्प
» कवि अर्जुन पराजुलीलाई खड्काले लगाए चोरीको आरोप : के हो त तथ्य ?
» थप ६ सङ्क्रमित
» विजय उत्सवमा सहभागी चढेको बस दुर्घटना : २४ जना घाइते
» Physical assault against medical people punishable by law
» Hungary’s new president visits Poland in 1st trip abroad
कुन दल अगाडि ? काँग्रेस अग्रस्थानमा, एमाले दोस्रो
- May 14, 2022 गते तीव्रखबरमा प्रकाशित
काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत विभिन्न पालिकामा मतगणना भइरहेको छ । कतै मतगणना सुरु गर्ने तयारी छ । पछिल्लो परिणाम अनुसार सबैभन्दा अगाडि कांग्रेसले अग्रता लिएको छ । कांग्रेसलाई एमालेले पछ्याइरहेको छ । तेस्रोमा माओवादीको रहेको छ । प्राप्त विवरणअनुसार कांग्रेस र एमाले समान तीन ठाउँमा विजयी भएका छन् ।
दुई पालिकामा भने नकपा एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । तीन पालिकामा विजयी भएको कांग्रेस ९५ पालिकामा अग्र स्थानमा छ । अग्रतामा कांग्रेसलाई पछ्याइरहेको एमाले ५२ पालिकामा अगाडि देखिएको छ । माओवादी ३० पालिकामा अगाडी छ भने नेकपा एकीकृत समाजवादी तीन पालिकामा अग्र स्थानमा छ ।
१० पालिकामा अन्य उम्मेदवारले अग्रता बनाएका छन् । उपप्रमुखमा कांग्रेस तीन पालिकामा विजयी भएको छ । एमाले दुई ठाउँमा विजयी भएको छ । समाजवादीका उम्मेदवार एक ठाउँमा विजयी भएका छन् । उपमेयरमा पनि कांग्रेसले अग्रतामा लिड गरेको छ । कांग्रेस ७७ स्थानमा अग्र स्थानमा छ । एमाले ६२ र माओवादी ४३ स्थानमा अग्र स्थानमा छ । समाजवादी भने ६ पालिकामा अगाडि छ ।
कवि अर्जुन पराजुलीलाई खड्काले लगाए चोरीको आरोप : के हो त तथ्य ?
विजय उत्सवमा सहभागी चढेको बस दुर्घटना : २४ जना घाइते
Hungary’s new president visits Poland in 1st trip abroad
धरानको मत गणना अवरुद्ध
मतगणना स्थलमा एमालेको नाराबाजी